अर्थशास्त्रसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरू
आज फेरी डलरले बनायो नयाँ रेकर्ड
काठमाडौँ, ५, जेठ ।डलरको भाउले दैनिक नयाँ रेकर्ड कायम गर्न थालेको छ । बुधबार १२४ रुपैयाँ ४१ पैसा पुगेर नयाँ...
हिजो घटेको सुनको मूल्य आज बढ्यो, तोलाको कति ?
काठमाडौँ, ५, जेठ । आज विहिबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ । हिजो बुधबार प्रतितोला ९५ हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार...
काठमाडौँ, ५, जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज एक अमेरिकी डलरको बिक्री मूल्य १२४.४४ रुपैयाँ र खरिद मूल्य १२३.८४ रुपैयाँ...
एक अर्ब २४ करोड ३३ लाख बढिले बढ्यो निर्वाचन खर्च
काठमाडौँ, ५, जेठ । निर्वाचन आयोगले ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय चुनाव गर्न सरकारबाट आठ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पाएको थियो...
दोर्दी खोला जलविद्युतको १० लाख ५४ हजार बढि कित्ता आईपीओमा आजसम्म मात्र आवेदन दिने सकिने
काठमाडौँ, ५, जेठ । दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले बैशाख १३ गतेदेखि निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको आईपीओमा आवेदन दिने...
अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिकको आईपीओमा आवेदन दिने म्याद थप
काठमाडौँ, ५, जेठ ।अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडले बैशाख २२ गतेदेखि निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको आईपीओमा आवेदन दिने...
रिभर फल्स पावरको आईपीओमा बुधबारसम्म १८ लाख बढी आवेदन, कति कित्ता शेयर खरिदमाग ?
काठमाडौँ, ४, वैशाख । रिभर फल्स पावरको आईपीओमा १८ लाख बढी आवेदन परेको छ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङले दिएको जानकारी अनुसार...
हिजो भारी अंकले घटेको शेयर बजार करिब ९ अंकले बढ्यो, कतिको भयो कारोबार ?
काठमाडौँ, ४, वैशाख ।साताको दोस्रो कारोबारको दिन (बुधबार) हरियो बिन्दुमा आएको छ । हिजो भारी अंकले घटेको नेपाल स्टक एक्सेन्ञ्च...
आज सुन प्रतितोला ९५ हजार आठ सय रूपैयाँ
काठमाडौँ, ४, जेठ । आज सुन-चाँदीको मूल्य घटेको छ। बुधबार सुन प्रतितोला ९५ हजार आठ सय रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ...
काठमाडौँ, ४, जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १८ पैसाले बढेर१२३...
प्रि ओपन सेसन : नेप्से परिसूचक साढे २ अंकले घट्यो
काठमाडौँ, ४, जेठ । आज साताको दोस्रो कारोबार दिन प्रि ओपन सेसनमा नेप्से परिसूचक साढे २ अंक घटेको छ । अघिल्लो...
रिभर फल्स पावरको २७ लाख ३० हजार कित्ता आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौँ, ४, जेठ । रिभर फल्स पावर लिमिटेडले बैशाख २८ गतेदेखि निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको आईपीओमा आवेदन दिने आज...
क्रिप्टोरकेन्सीमा भारी गिरावट
काठमाडौँ, ४, जेठ । विश्वकै सर्वाधिक ठुलो क्रिप्टोरकेन्सीमा भारी गिरावट आएको छ । जसबाट मानिसहरुलाई क्रिप्टोकरेन्सीमाथि विश्वास डगमगाएको छ । यसैगरी...
बढ्यो सार्वजनिक यातायातको भाडा, कति रुपैयाँले बढ्यो ?
काठमाडौँ, ४, जेठ । सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा बढाएको छ। सरकारले जेठ ४ गतेदेखि लागू हुनेगरी न्यूनतम ३.५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ५.१...
चारदिन पछि खुलेको शेयरबजारमा पहिरो
काठमाडौँ, ३, जेठ ।आज साताको पहिलो कारोबार दिन नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा ८४ अंकको गिरावट आएको छ । स्थानीय तहको...
नेप्सेमा ६४ लाख ४२ हजार कित्ता बोनस शेयर सूचीकृत, कुन कम्पनीको ?
काठमाडौँ, ३, जेठ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा आज (मंगलबार) नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको बोनस शेयर सूचिकृत भएको...
रिभर फल्स पावरको आईपीओमा १४ लाख बढी आवेदन, कति कित्ता शेयर खरिदमाग ?
काठमाडौँ, ३, जेठ । रिभर फल्स पावरको आईपीओमा १४ लाख बढी आवेदन परेको छ । धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटलका...
सुनको मूल्य तोलामा २०० ले बढ्दा चाँदीको कति ?
काठमाडौँ, ३, जेठ । मंगलबार नेपाली बजारमा सुनचाँदी दुवैको मूल्य बढेको छ । आइतबार प्रतितोला ९६ हजार ५०० रुपैंयामा कारोबार भएको...
काठमाडौँ, ३, जेठ । मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकले एक अमेरिकी डलरको खरिददर १२३ रुपैंया ६३ पैसा तोकेको छ भने बिक्रीदर...
आईओसीले फेरि पठायो ८ रुपैयाँ बढाएर पेट्रोलको नयाँ मूल्य
काठमाडौँ, २, जेठ ।भारतीय आयल निगम(आईओसी)ले नेपाल आयल निगमलाई इन्धनको मूल्य फेरि बढाएर पठाएको छ । आइओसीले प्रत्येक अंग्रेजी महिनाको...